Ubuntu / Kubuntu နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောသူများသည် CD အရွယ်အစားကိုစွန့်လွှတ်ကြသည် Linux မှ
Ubuntu / Kubuntu နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသူများသည် CD အရွယ်အစားကျဆင်းသည်
၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ Ubuntu ကို နောက်ဆုံး Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal ၏ပထမဆုံး Beta ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိပြီးဖြစ်သည်။ သူ၏နောက်ဆုံးသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုအောက်တိုဘာလနောက်တွင်ဖြန့်ချိမည်။
တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏စာပို့စာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Kate Stewart က Ubuntu .ISO ပုံရိပ်များကို CD, DVD နှင့် Alterna ဗားရှင်းများတွင်ထုပ်ပိုးတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ Ubuntu 12.10 အရ 800 MB သာပုံရိပ်တစ်ခုတည်းကိုသာထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် Ubuntu ၏ကွဲပြားခြားနားသော Desktop နှင့် Laptop ကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းကြောင့်အခြား Ubuntu installation option များဖြင့်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ဒီအတိုင်းအတာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော version မှာ Ubuntu server version Ubuntu Server ဖြစ်သည်။
Kubuntu မှာလည်း ISO ပုံသဏ္aာန်ပိုလေးနေပေမယ့် 1 GiB အထိတိုးချဲ့ပေးမှာဖြစ်ပေမယ့် Kubuntu မှာလည်းအလားတူပဲ။
၎င်းပြောင်းလဲမှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် Ubuntu ပါ ၀ င်သော package တွင်တိုးတက်မှုများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည် ၁၀၀ megabytes ထက်ပိုသောကြောင့်၊ developer များကကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးရန်မလိုသောကြောင့်ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းသာရှိလိမ့်မည်။
Ubuntu 12.10 ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များထဲတွင် hard drive encryption ကိုထောက်ခံမှုUpdate Manager ကို Software Updater ဟုအမည်ပေးပြီး Unity သည် view mode အသစ် (dash previews နှင့် coverflows view) နှင့် Python 6.4 မှ Python2သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့် version3သို့ update လုပ်သည်။
KDE သည်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း 4.9.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
New LightDM Login Manager, ၀ င်ရောက်ရန် Guest ည့်သည်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဓာတ်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ရန် DigiKam 2.8 သို့အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
သင်အမြဲတွေ့နိုင်ပါသည် တရားဝင်ကြေငြာချက် အပြောင်းအလဲအားလုံးနှင့်အတူ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Eddy Solís Santana!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Ubuntu / Kubuntu နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသူများသည် CD အရွယ်အစားကျဆင်းသည်
အိတ်ကပ်နာနေတယ်။ Duster သည်ဤအရာများကိုမည်သို့ကြည့်သည်ကို Hehe ။
ထို့ထက်ကား၊ စီဒီသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးလူများ၏စီးပွားရေးအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ဒီဗီဒီထက်စီဒီတစ်ချပ်လောက်တန်ဖိုးနည်းသင့်ပါသည်။
ငါ beta သဘောတူလိုက်တာနဲ့လွှတ်ပေးမယ့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့မတူဘူး၊ တရားဝင်ကြေငြာချက်မှာတင်ထားတဲ့ link မှာပထမစာပိုဒ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည် -“ … Ubuntu အသင်းသည် Ubuntu ၏ပထမဆုံး BETA ဖြန့်ချိမှုကိုကြေငြာရန်ကျေနပ်သည်
12.10 Desktop, Server, Cloud နှင့် Core ထုတ်ကုန်များ…။ » …မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ BETA 1 သည် RC မဟုတ်ပါ။ ရွှင်လန်းမှု…
သတင်းကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်သိသောလူအများစုသည် USB ကိုသုံးကြပြီးယခုအချိန်တွင် 700 megabytes ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်
သူ့ဟာသူမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်မရှိပါ။ စျေးနှုန်းမှာ? pff ... တစ်ဒေါ်လာထက်ပိုနည်း? အများစုမှာ USB ကိုစတင်အသုံးပြုနေကြသည်။ ထို့အပြင်စနစ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုကောင်းဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ Canonisoft နှင့်စပ်လျဉ်း။ ... ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာနှင့်အလွန်ဝေးကွာသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ Slackware တောင်မှအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်သူကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ despot system တစ်ခုလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Debian …ရီပတ်ဘလီကန်နိုင်ငံ… bullshit ။
Archoso ၏ရင်းမြစ်များ၊ ကျွန်ုပ်သည် Vi ကိုတခါမှမသုံးဖူးသောကြောင့်။ ထိုစကားလုံးသည်သင်၏တီထွင်မှုဖြစ်ဆဲဖြစ်ပြီး Ubuntu fanboys များ၏လက်ရှိတန်ဖိုးကိုအခြေခံသည်။
သတင်းရင်းမြစ်မရှိရင်အဲဒါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ (Ubunto ၏စည်းမျဉ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်သင်၏ပြောဆိုချက်ကိုသက်သေပြရန်ဘယ်သောအခါမျှဘယ်သောအခါမျှမထည့်ပါ။ )
Vi $ ta မှ virtualized Arch ကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှသုံးလိမ့်မည်မထင်ပါ။ စမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ဟာသအဘို့, ငါဆိုသည်ကား, ဒါဟာမိုက်မဲသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
စကားမစပ် ... ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုဘယ်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြနိုင်လား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒါကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ထင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါလည်းမှားတာပဲ
ဒါကြောင့် Ubuntu မှ လွဲ၍ မည်သည့်အသုံးပြုမှုကိုမဆိုအသုံးပြုသူမည်သူမဆိုတိုက်ခိုက်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကပင်ခေတ်ကုန်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်သင်မည်သည့်ကမ္ဘာတွင်နေထိုင်သည်ကိုမသိပါ။
Ubuntu ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တခြား distro တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တာလီဘန်၊ troll၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့သားရဲ့ ... သင်သေဖို့လိုပါတယ်။
ထိုအခါဤသုံးစွဲသူများသည် Linux တွင်မကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရှိသည်ဟုပြောသူများအတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်မအံ့သြမိပါ၊ သူတို့လုပ်သောအရာများနှင့်အတူမည်သူမဆိုခြိမ်းခြောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Ubuntu ကိုမသုံးသောရိုးရှင်းသောအချက်ကြောင့်သင်သည်သင်၏စော်ကားမှုများ၊ အရည်အချင်းမပြည့်မှီမှုများဖြင့်သင်ပြန်လာလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ မဟုတ်ရင်အခြားသူများကို ဦး တည်သင့်ရဲ့စွဲနှင့်အတူ။
Ubuntu ကိုမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မသုံးပါက၎င်းကိုမည်သူအသုံးပြုသည်နှင့်တမျှလေးစားမှုရှိသည်။ ပွိုင့်။
ဒီဗီဒီကူးစက်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်၊ စားစရာတောင်မလုံလောက်သေးတဲ့အလုပ်လက်မဲ့လူတွေရှိတယ်၊ သူတို့နှစ် ဦး ကြားမှာစီဒီထဲကိုရောက်သွားတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ၊ ကောင်းပြီ၊ သူတို့ဟာအရှိန်မြှင့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။
LTS? ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုလူတိုင်းမသုံးကြဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဗားရှင်းကသူတို့အတွက်လုံလောက်တယ်။
၀ င်ငွေနည်းခြင်း၊ ၀ င်ငွေနည်းခြင်း၊ ၆ လတစ်ကြိမ်စိတ်ဆင်းရဲဖွယ် DVD ကိုကုန်ကျစရိတ်ကို ၆ လတစ်ကြိမ်ကောက်ယူရန်မတတ်နိုင်ခြင်းကဤဥပမာတွင်ဖော်ပြထားသောငွေစုခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်မရှိခြင်းကြောင့်ချမ်းသာရန်မဖြစ်သင့်ပါ။ မဖြစ်နိုင်ပါ (သို့) ဘယ်သောအခါမျှအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်တည်ရှိနေသောအချိန်နှင့်အလွန်ကြီးမားသောကွာခြားချက်ကြောင့်၎င်းကုန်ကျစရိတ်ကိုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၆ လလျှင်တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှသာပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သိုလှောင်ရေးမီဒီယာသည်စျေးနှုန်းထက် ပို၍ နိမ့်ကျလေ့ရှိပြီး၊ ဤတွင်သင်၏ငွေစုသည်မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်ဟုပြောရန် ပို၍ အကြောင်းပြသည်။ (floppy နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့ CD သို့မဟုတ် DVD ထက် ပို၍ စျေးကြီးလာသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ CD တွေ vs CD တွေ၊ ပိုပြီးစျေးကြီးပြီးထူးဆန်းတဲ့ diskettes များ) ။
သို့သော်မည်သူမျှ Ubuntu ဗားရှင်းအားတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်မှတ်တမ်းတင်ရန် ၆ လတစ်ကြိမ် DVD မဖြုန်းတီးရ။ မလိုအပ်ပါ။ သင်မသိလျှင် ၂ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထွက်ပေါ်လာသည့် LTS ဗားရှင်းနှင့် ၅ နှစ်ထောက်ပံ့မှု ထိုကိစ္စတွင်၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်သို့ သွား၍ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုကြိုးစားအသုံးပြုလိုသည်ဟူသောယူဆချက်တွင်ရှိလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်သို့သွားရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ငွေစုခြင်းနှင့်မညီသောကြောင့်ရယ်စရာဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးမည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုလုပ်ပါ ၆ လတစ်ကြိမ်ဒီဗီဒီအသုံးပြုခြင်းကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ (သင်နှစ်သက်လျှင်) ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
စကားမစပ် Archoso ကိုကျွန်တော်မတီထွင်ခဲ့ဘူး၊ တချို့နေရာတွေမှာတွေ့ပြီးပြီ။ Ubuntoso ဆိုတဲ့ဝေါဟာရနဲ့ဆင်တူတယ်။ သူတို့ကသင်ရောငါမတီထွင်ခဲ့ဖူးတဲ့ဝေါဟာရများပါ။ နဂိုကတည်းကဒီစကားလုံးတွေကိုတီထွင်ချင်သူဖြစ်ချင်လိမ့်မည်။ သူတို့တစ်ချိန်တည်းမှာရယ်စရာဖြစ်သကဲ့သို့ရယ်စရာကောင်းမည်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ကိစ္စမှာမင်းကိုသင်ရည်ညွှန်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းကိုရည်ညွှန်းဖို့သုံးခဲ့တယ်။ Taliban (သို့) X distro ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အခြားတိုက်ခိုက်သူတစ် ဦး အားဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ လက်ရှိတွင် (သင်သတိထားမိပါက) အများစုသည် Ubuntu ကိုအသုံးပြုသောမည်သူမဆိုကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေသည့်အခြားအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းများမှသုံးစွဲသူများဖြစ်သည်။ အခြားအပန်းဖြေနေရာများတွင်လည်းသူတို့နောက်တွင်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများရှိသည်။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်သူတို့၏အိတ်ကပ်များကိုဖြည့်ရန်ကြိုးစားကြသည် (ကောင်းသောနှင့်ပိုကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီမရှိ)
ဒါကြောင့်ငါချစ်ရတဲ့« Archoso » (Windows Vista ကတည်းက Arch virtualized ကိုသုံးပြီး X အကြောင်းပြချက်များအရအခြား distros များကိုသုံးသောအသုံးပြုသူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုသူသည်မကျေနပ်မှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်သို့မဟုတ်သင်ဘာဖြစ်လို့ငရဲဖြစ်ရတာလဲ၊ အသံလား) စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော Archoso que Ubuntoso-) သင်သိပြီးဖြစ်သည်။
«ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးအားလုံးအပေါ်အဆိုးရွားဆုံးသောစော်ကားမှုသည်သူ၏ပါးစပ် မှနေ၍ လာသည်»
ငါကအရမ်းအားကောင်းတဲ့တစ်ခုခု xD ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့ပြီးထင်ပါတယ်
Ubuntuso စည်းမျဉ်းများ? WOW ဟားဟား…မင်းငါ့ကိုရယ်စေပြီးစိတ်ကူးမရှိဘူး။ ငါသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းဒီစကားလုံးဟာတခြားတီထွင်မှုတွေထက်သင်ရဲ့တီထွင်မှုဖြစ်ဟန်တူတယ်၊ Ubuntuso rules တွေကိုသင်သတ်မှတ်လိုက်တာလား။ သင်သည်နောက်ဆက်တစ်ခုအားမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုသင့်သည်ကိုသတ်မှတ်သူဖြစ်ပါသလား။ ငါသာကလေးတစ် ဦး ထိုကဲ့သို့သောပabိပက္ခဖန်တီးနိုင်စွမ်းကပြောသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ Archoso ကိုတွေ့ခဲ့သည့်နေရာကိုရှာရန်အချိန်အလုံအလောက်မရှိပါ။ သို့သော် Ubuntusos နှင့် Archosos နှင့် Mintosos တို့နှစ် ဦး စလုံး (ဟုတ်ကဲ့၊ xD ကိုလည်းကျွန်ုပ်မြင်ဖူးပါသည်) နှစ်ခုစလုံးကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပြောပြခဲ့သည့်အချို့သောမှတ်ချက်များတွင်၎င်းကိုတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ဘ ၀ တစ်ခုလုံး၊ ငါထင်တယ် MuyLinux၊ Ubuntulog (သို့) Taringa မှာ၊ ငါကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူး၊ မင်းဒီလောက်စိတ် ၀ င်စားတယ်ဆိုတာရှာတွေ့တယ်။ စကားမစပ်၊ မင်းကိုစိတ်ပျက်မိအောင်ငါဝမ်းနည်းပေမယ့်ထပ်ခါတလဲလဲပြောရရင်၊ ကျွန်တော်ဟာတီထွင်သူမဟုတ်ပါဘူး။
အဆုံး၌မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဤကိစ္စသည်ဆီလျှော်မှုမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်သိသမျှအတိုင်း Ubuntoso နှင့် Archoso (Debionoso, Mintoso, Fedoroso, Chakroso နှင့် BEARS အားလုံးရှိခဲ့ပြီးသောနေရာများရှိသည်) ရှိသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားတွင်မပါ၊ RAE စသည်ဖြင့်…ဒါ…မကျေနပ်ချက်ကဘာလဲ။
Ubuntusos မှ ၀ န်ထမ်းများသို့ (အသုံးပြုသူ) သို့စတင်ခေါ်ဆိုသူသည်နောက်ကွယ်မှမှတ်ချက်များတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏မထီမဲ့မြင်ပြုမှုကို ဦး တည်သည့်သင်၏မုန်းတီးမှုကိုသတိပြုမိသည့်အခါကောင်းကင်တမန်ငယ်လေးအဖြစ်ဟန်ဆောင်မပြပါနှင့် Ubuntu ကိုအထူးသဖြင့် Ubuntu ကိုအသုံးပြုသောသူများသည်သူမအတွက်အလွန်မိုက်မဲသောမိန်းကလေး (မိုက်မဲသူအတွက်) သူ့ကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ ယခုမှ စ၍ ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးအားလုံးအပေါ်အဆိုးရွားဆုံးကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုကသူ၏ပါးစပ်မှထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ , ငါ့လုပ်နေတာကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်အထိစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ်ငါ Vista ဆိုတဲ့အရာကိုထပ်ထည့်လိုက်ပြီ။ တီထွင်မှုဟာငါ့အတွက်မဟုတ်ပေမယ့် Billy Puertas နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်။ အဲဒါကိုအခုအချိန်မှာထိတွေ့မှုကိုပိုမိုအရသာပေးနိုင်ဖို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ သတင်းရဲ့အကြောင်းအရာဟာဘယ်လောက်အထိသက်ဆိုင်ပြီးသိသာထင်ရှားသလဲဆိုတာငြင်းဖို့အငြင်းပွားစရာတွေမရှိတော့တာကိုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခု။ အဘယ်သူသည်ဆင်းရဲသောမာရ်နတ်သိတယ်။
ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ငါသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့အဖြေကမှတ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်ရဲ့အနေအထားကိုနားလည်ဖို့သင်ပေးထားပြီးဖြစ်ပြီး၊ သင့်ရဲ့စံနှုန်းအရဆိုးဝါးတဲ့သင့်ရဲ့စံနှုန်းအရကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားမြင်တွေ့စေပြီ ရုပ်ရှင်၏ကောင်လေး ... ယခုငါစဉ်းစားသောအခါ (၎င်းသည်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း) နှင့် x32 သို့အပြည့်အ ၀ 86-bit support ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်စီစဉ်ထားသော Chakra ကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုများကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ချင်သည်။ သုံးစွဲသူဆင်းရဲသူများ၊ 64-bit ကွန်ပျူတာမတတ်နိုင်သောသူတို့သည်ဆင်းရဲသောဤ Chakra သည်% $ & @ & =)? = ~ …။ နောက်ဆုံးတော့သူတို့ Ubuntu မဟုတ်တော့ဘူး။
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမပါဘဲငါ့ချစ်လှစွာသော "Archoso ။ "
Hahaha ကိုလည်း hahaha ကိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
Archoso ဆိုတာဘာလဲ။ xDDD ကျွန်တော့်သိသည်အတိုင်း Linux ကိုသုံးသော fanboy များ၏ ၉၉% သည် Winbuntu တွင်ရှိသည်။
Archosos သည်သင်မတည်ရှိသောကြောင့်သင်တီထွင်ခဲ့သောစကားလုံးအနည်းငယ်ကိုဖန်တီးရန်သင့်နာမည် Winbuntu fanboys ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ubunctual အသုံးပြုသူများအငြင်းပွားမှုသည်အမြဲတမ်းအတူတူပဲ၊ အခြား distros များကိုသုံးသောသူတို့ကိုစော်ကားခြင်းနှင့်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Vi $ ta ကိုမသုံးပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ခါမှမသုံးဖူးပါ။
မည်သူမဆိုကိုမစီရင်ခင်၊ သင်သည်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်လေ့လာသင့်သည်။
အဲဒီမှာလျှို့ဝှက်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအဲဒီလိုမှတ်ချက်တွေမပေးရဘူး။ ဒါကြောင့်မင်းကသိမ်းနိုင်တယ်။ နောက်မှသူတို့ကမင်းကိုတစ်ခုခုပြောရင်မင်းကမင်းကိုတိုင်ကြားမယ်။
ဒီဗီဒီတစ်ခုနဲ့ကွာခြားချက်ကတော့မနာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၆ လတစ်ကြိမ်နောက်တစ်ခုကိုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုတွေ့နိုင်ပါပြီ။
USB အရာသည်ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သော်လည်းစီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်လူတိုင်းသည် X အချိန်တိုင်းကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ၀ ယ်လိုကြသည်မဟုတ်ပါ။
မြေလူ၊ မင်းဟာတကယ့်ကမ္ဘာမှာရှိနေတယ်၊ ​​လူတိုင်းချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာအနည်းငယ်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
လက်ရှိတွင်စီဒီ (သို့) ဒီဗီဒီအကြားကုန်ကျစရိတ်ကွာခြားချက်သည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်သာဖြစ်သည်။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိပါသလဲ။ ကုန်ကျစရိတ်ကွာခြားချက်မှာသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ပြီးသင်မယူဆနိုင်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဟေး၊ မင်းကအထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့မိဘတွေဟာကပ်ပါးကောင်လိုနေထိုင်ပြီးဒီဗီဒီတောင်မ ၀ ယ်နိုင်ရင်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အခြားတစ်ချက်ကတော့ pentium4နောက်ပိုင်းမှကွန်ပျူတာအများစုသည် USB ဖြင့် boot လုပ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်လက်ရှိကွန်ပျူတာကခွင့်ပြုခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ပျမ်းမျှ operating system ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်ရန်သာဖြစ်သည်။ လက်ရှိသို့မဟုတ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံကိုခွင့်ပြုပါ။ Ubuntu နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအားသင်ကိုယ်တိုင်ရည်ညွှန်းသလောက်သင်အသုံးပြုသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်မည်လား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြားချပ်ချပ်နှင့်သင်မည်သို့ရေးသည်ကိုမြင်ရခြင်းကကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန် Archosos များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်းသူတို့၏ hasefroch အမြင်ဖြင့်၎င်းကို virtualized အသုံးပြုသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကဘာကြောင့်ဘာအကြောင်းကြောင့်မသိဘဲဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုစီရင်ဆုံးဖြတ်သလဲ။ Slackware သည်ကြီးမားပြီးအတိအကျတူညီနေမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည် despotic system တစ်ခုကဲ့သို့ရှိမည်မဟုတ်ချေ။ သင်ကောင်းစွာလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ကောင်းသောအချက်တစ်ခုအနေနှင့်သင်အတူတူဆက်လုပ်သွားမည်။
စျေးနှုန်းမှာ? ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့တိုင်းပြည်ကိုငါမသိပေမယ့်ငါ့မှာမင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။
အများစုသည် USB ကိုအသုံးပြုကြသော်လည်းကွန်ပျူတာအားလုံးက USB boot မလုပ်နိုင်ပါ
ammm ငါဆွေးနွေးချက် xD ကိုဖတ်ပြီးနောက်မှကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ငါ pc ပေါ်တွင် arch ကိုသုံးသည်။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ခန့်ကကောင်းသည်ဟုပြောနိုင်သည်။ g 4gb ram Phenom II x4 ပရိုဆက်ဆာ gigabyte board နှင့် usb6စသည်ဖြင့်ပိုဆိုးသည်။ ငါသုံးတဲ့ operating system ကို Windows မှာကောင်းကောင်းသိချင်ရင်တောင်မှအိပ်မက်တောင်မက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါက Ubuntu ကိုသုံးပြီးပြီဆိုရင်တစ်ခါတစ်လေမှာ installation လုပ်ငန်းတော်တော်များများကိုသက်သာစေတယ်ဆိုတာဝန်ခံရမယ်။ Arch ကိုအပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီး KDE ကို desktop ပေါ်တွင် arch နှင့်ပြုပြင်လိုသည့်အခါအိပ်မက်ဆိုးများကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် linux world သို့ ၀ င်ရောက်လာသူများစွာကိုကြောက်ရွံ့စေသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်သူနှစ်သက်သောအရာကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးပြုကြသည်။ သူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ယခုသင်၌အချိန်ရှိသည်၊ ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိဘဲပျင်းနေလျှင်၊ သင်လေ့လာလို။ သတ်ပစ်ရန် partition သေးငယ်သည့်အသေးတစ်ခုတွင်တပ်ဆင်ပါ။ မဟုတ်ပါ၊ ဖျက်ပစ်ပါ၊ အရာဝိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောကြောင့်ရပ်ရွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၌မရှိသောတစ်ခုဖြစ်သည် Vidirnos, ဒီစိတ်ပျက်ဖွယ်စည်းလုံးညီညွတ်သောယောက်ျားလေးများသည်ငါတို့ပေါင်းစည်းလျှင်ရပ်ရွာကြီးပွားလိမ့်မည် !!
Debian Wheezy + KDE 4.8.x: တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း